Pagoda - i "umculo" ezakhiwo Buddhism
Okunenhlonipho wokwenama, sijabulisa futhi emangalisayo, kukhona ukucatshangelwa ngokuvakashela izindawo zokukhulekela, akuve kuvamile ukuba China ne Japan, India kanye ne-Vietnam, Cambodia, Korea, Thailand nakwamanye amazwe, eshumayela nobuBuddha.
Pagoda - a multi-tiered ethempelini umbhoshongo (Obelisk inkundla) nge imihlobiso eminingi egqamile futhi emaceleni. It ekuqaleni yayisebenza njengenkantolo yisikhumbuzo, olondolozela izinsalela eziningi - izinsalela Buddhas nomlotha izindela. Ukwakhiwa nezinsuku mbhoshongo yokuqala kakhulu kusukela ekuqaleni ezitholakala kule nkathi yethu.
Ukuvela e China, bona ziyasatshalalaiswa kulo South-East Asia naseMpumalanga Ekude. Ngokusho yetinsita yamaShayina yasendulo, i-mbhoshongo ayehloselwe waphulukisa abantu ezifweni, ukuqonda iqiniso enqubeni zokuzindla, kanye ukuze uthole ithuba lokuba engabonakali izitha. Nokho, ukuziphatha okubi kakhulu womuntu okuye kwaholela ngayo iqiniso lokuthi lezi zakhiwo "ukufihla" amandla akhe ayisimangaliso.
Okusho ukuthi "mbhoshongo" ngokwezwi nezwi ehunyushwa ngokuthi kusukela isiPutukezi (A mbhoshongo) futhi-Sanskrit ( "bhagavat") - "Igugu Tower". izakhiwo Izigodlo ingxenye enkulu igcinwe injongo primordial, kodwa ukufinyelela ukuba izihambi zezindela ekhona kungagcini. ukwakhiwa Park wenziwa indima kunalokho ongokomfanekiso, edonsa eziningi izivakashi umhlobiso ingaphakathi esiyingqayizivele kanye nekhono ukuhlola indawo kusuka ukuphakama uqimba ngamunye. Kodwa abakwazi ukubona kuqhutshwa inkonzo yomngcwabo futhi izinto ezingcwele ngempela.
ubukhazikhazi Brilliant zezakhiwo engcwele, kahle nokugcina ukucwatha ezihloniphekayo, ungathi, ngokuvamile izakhiwo esigodlweni. mbhoshongo Imperial - lesi sakhiwo, eliqoshiwe nodwendwe ekhethekile, kanye nobuhle, embozwe tile ophuzi, umbala owawufanekisela amandla ophakeme.
abakhi Chinese esakhiwe izakhiwo ku ubuchwepheshe yasekuqaleni ngesisekelo ngokhuni ukwakha ngohlaka "dougun" kusho "ebhakedeni futhi uvumelanise." Ngenkathi kwakhiwa izindlu ezinjalo alisetshenziswa ngensimbi nail olulodwa. NabasePoland ngaphandle ngendlela ethile futhi ekuqiniseni imishayo zabo, amaShayina sezisungule uhlaka esagcina embozwe kophahla tile esindayo. Kodwa into ezithakazelisayo: okudambisa ingcindezi izigxobo Chinese esakhiwe mbhoshongo ufushanisiwe ka imishayo yokhuni, ngezizathu ebanzi lapho waphumula esitezi phezulu, futhi phezulu - kokuthunyelwe. Ngenxa yalokho, wonke umthwalo esiwela kulabo izinti, zehlukene isayizi shape kanye abizwa ngokuthi "imikhumbi edlula kulolu lwandle" - "Ketha", ngokulandelana, "Ingungu" - "uvumelanise".
Ngakho, mbhoshongo - kungcono isakhiwo emangalisayo, lapho izindonga musa athwale noma yimuphi umthwalo. Zenza imisebenzi kanye ngodonga ukuvumela ukufaka kwamafasitela neminyango isamba ezingafanele.
Bokuqala mbhoshongo Chinese eyakhelwe esime isikwele, futhi kulapho izakhiwo yamuva baye baba eziyisithupha, octagonal futhi dodecagonal, abanye - round. Ungathola izakhiwo ngokhuni netshe, kodwa kaningi lisetshenziswe oblivnye izitini, lensimbi nelethusi. Isibalo amazinga mbhoshongo yamaShayina yasendulo ngokuvamile lingalingani, izakhiwo ezivamile nge amazinga 5-13. Fantasy abaklami yamisa isakhiwo ngomusa, ukugcina ngokuyisimangaliso ezungezile isikhala yemvelo futhi ukwakha eliyingqayizivele Ensemble yezakhiwo. Ngokwesiko, lezi zakhiwo zakhiwa endaweni enezintaba, kude izindawo umatasa asenkabeni yeChina.
Pagoda eSifundazweni Shanxi, izakhiwo esigodlweni
Sinesithakazelo ngokukhethekile yilona wedwa pagodas 9-tiered (ukuphakama kwalo - 70 metres) eSifundazweni Shanxi, lakhiwa iminyaka engaba inkulungwane eyedlule. Lona kakhulu esakhiweni sezingodo yasendulo emhlabeni osekhona nanamuhla. Futhi ubunjalo design anti-zokuzamazama komhlaba uye wakugcina ngenxa yokuzamazama komhlaba ku eminingi elimazayo.
IsiShayina mbhoshongo-isitayela esigodlweni izakhiwo agcizelele ubukhulu imithetho yombusi. Ngomusa, uphahla sokutakula, ehlotshiswe izibalo zezinyoni nezilwane, ukukhonza sokukhipha amanzi emvula kude isisekelo isakhiwo. Lokhu kukuvumela ukuba ugcine izindonga okhuni umswakama, okwenza lezi zakhiwo okuhlala isikhathi eside.
Japanese Pagoda - Buddha Umculo
Ingokomoya ukudala isimo Japanese engadini kuthathwe uqonde amathempeli Buddhist at eziphakeme, yemvelo noma emishinini. Ngokuvamile, ukuvuselelwa wesango engadini qala, bese - mbhoshongo Japanese, kuyinto mhlobiso of into oluyinhlanganisela.
Ukuphakama zakhiwo ayikho into engavimba, ngaphandle ... izibani itshe, okufanele ngezansi mbhoshongo ezikhathini 1,5-2. Ezweni lapho ilanga liphuma, zingaba amathuluzi amancane kakhulu (kufika ku 1 imitha), itholakala ingadi encane. Lokhu kusho ukuthi indawo ukubonakala lingekho izibani itshe. Ngokwe canons classical Pagoda - isakhiwo ehlanganisa amatshe ngabanye futhi obumba kumila sikwele. kwesigaba layo mpo - trapezoid emaceleni lwalugobile. Ezithakazelisa kakhulu ukuthi amatshe mbhoshongo Japanese kungukuthi eqondiswa nomunye, kanti isakhiwo kugcinwa ngenxa isisindo sazo. Ngakho-ke, kwathi lapho umsebenzi wokwakha yayo kubaluleke kakhulu ukubala ngokucophelela kanye nokunemba.
Ngaphansi kwesimo indawo enhle kakhulu emkhathini ukuzola aphefumulelwe owandile mbhoshongo tiered, ezihlukile, eziphakeme kanye nemibala egqamile. Bona amehlo futhi ajabulise umcabango yomuntu.
Kuhle Imikhosi Umhlaba
Damn - yilokho kuyisiqalekiso? Igama incazelo, incazelo nezibonelo
Sikhungo ngowamaphuphu eMoscow (2015)
Yacht Club "Admiral": iholidi omkhulu e-Krasnoyarsk
Imibuzo Tupeyshie wabuzwa abantu
Ukunyakaza kwengane: indlela yokubala, ukuhlolwa, ukuzwa
Amazambane Granada: incazelo ezihlukahlukene, ukutshalwa
Kanjani ukuqonda ukuthini inkulumo ethi "zonke ihlaya kukhona ezinye ihlaya"?
Pyrantel - yokusetshenziswa.
Nail Umumo Pipe
Izimpawu stomatitis - ithuba lokucabangisisa ngokuziphatha impilo yabo
Elimile nokucwiliswa blender: ukubuyekezwa kanye izici Ukukhetha
Abadlali "Yini? Kuphi? Nini?". ochwepheshe odumile we club
Perm, yokudlela "USSR". Dance yokudlela, Perm Izibuyekezo
Kuthiwani uma ngesikhathi sokukhulelwa esifubeni libuhlungu